Uyenza njani iNguqu yakho yeDijithali ngobuDlelane boPhembelelo | Martech Zone
Abathengi bakho baya benolwazi ngakumbi, baxhotyiswa, bafuna ngenkani, banengqiqo, kwaye abakwazi ukufikelela. Amaqhinga kunye neemetriki zexesha elidlulileyo azisahambelani nendlela abantu abathatha ngayo izigqibo kwihlabathi lanamhlanje ledigital kwaye lixhunyiwe.
Ngokufezekisa abathengisi betekhnoloji bayakwazi ukuba nefuthe ngokusisiseko kwindlela abalujonga ngayo uphawu lohambo lwabathengi. Inyaniso, I-34% yenguqu yedijithali ikhokelwa zii-CMOs xa kuthelekiswa ne-19% kuphela ekhokelwa zii-CTO kunye nee-CIOs.
Kubathengisi, olu tshintsho luza njengekrele elintlangothi-mbini. Ngokusebenzisa inguqu yedijithali, ii-CMO zinokuchaphazela lonke ixesha elincinci kuhambo lwabathengi. Kwelinye icala, nge I-70% yemizamo yotshintsho kwimibutho engaphumeleliyo, ingaba utshintsho lwedijithali olwenziwa nguvulindlela ngabathengisi luyibona njani impumelelo?
Ukuzisa Impembelelo ye-2.0: Ixesha elizayo lokuThengisa ukuPhembelela
Ukukunceda ufumane indlela yakho kule ndawo eguqukayo, sisebenzisana nayo Intengiso ephezulu noBrian Solis, uMhlalutyi oyiNtloko, iQela leAltimeter, ukuphonononga abathengisi abalawulayo kumashishini aphambili, kubandakanya iAmerican Express, 3M, Adobe neMicrosoft. Umsebenzi wethu? Ukufumanisa ukuba isenzo sentengiso eshukumisayo siguquka njani kwaye sinike isikhokelo esidibanisa amachaphaza phakathi "kwempembelelo yokuthengisa" yanamhlanje kunye "nobudlelwane obushukumisayo" bangomso.
Impembelelo ye-2.0: Ixesha elizayo lokuThengiswa kweMpembelelo Imalunga nokufumanisa umhlaba wobudlelwane obunempembelelo-uqeqesho olutsha olugqitha kulo lonke urhwebo oluqhutywa lulwalamano, olwakhiwe kwisiseko sovelwano kunye nokujongwa kwabathengi. Olu phando lutsha lusikhanyisela kwiindlela zempembelelo ze-2.0, ezidibanisa amaqela ahlukeneyo ukuba nefuthe kwintengiso, ukoneliseka kwabathengi kunye nokugcinwa.
Ngelixa ndingakukhuthaza kakhulu ukuba khuphela ingxelo epheleleyo Ukufumana uphando oludingayo lokuhamba kule ndawo intsha ngokuzithemba, ndiza kukunika umbono omde phakathi kwengxelo.
Abanini beNkqubo yokuPhembelela kunye nabaXhasi abakhutshelwanga
Omnye wemiceli mngeni echaphazela ikamva lentengiso enefuthe kukuba ihlala ihlelwe ngokwamacandelo. Oku kuthintela impembelelo ekufumaneni ingqalelo yesigqeba kunye nokuzuza kumzamo omkhulu wenguqu kwidijithali. Kwangelo xesha, safunda ukuba utshintsho lwedijithali kunye nefuthe lobudlelwane ngokufanayo zichaphazela zonke iinkalo zeshishini.
Sifumanise ukuba Iipesenti ezingama-70 zeenkqubo ezinefuthe zazo zezokuthengisa, Kodwa eminye imisebenzi, kubandakanya ibango gen, PR, imveliso, kunye nemidiya yoluntu, ukuzibandakanya ngokubonakalayo nabashukumisayo. I-80% yabathengisi ithi zintathu okanye ngaphezulu Amasebe asebenza nabantu abanempembelelo, oko kuthetha ukuba impembelelo kufuneka ibe yeyabantu abanomsebenzi onqamlezileyo kunokuba ngumnini wesintu oyedwa wentengiso. Impembelelo idinga iqela leentshatsheli kuyo yonke le misebenzi eyahlukeneyo ukufumana ingqwalaselo yesigqeba kunye nefuthe kuhambo lwabathengi kuyo yonke indawo yokuphela.
Ubudlelwane bempembelelo obuchaphazeleke bubuchule bohambo lwabaThengi
Sisiqingatha kuphela (iipesenti ezingama-54) zabarhwebi abathe babonisa imephu yohambo lwabathengi kunyaka ophelileyo. Uninzi lweenkampani ezenza imephu yoluhambo zifumana umbono ocacileyo, ojolise kubathengi onefuthe elikhulu ngaphandle kweqela lentengiso. Imephu yohambo iyimfuneko kwiinkampani ukuze zifumane ukuqonda kwaye ekugqibeleni, ithuba lokukhuphisana.
Ukuba ubunokuncedisa kwinkqubo yemephu yabathengi ngeqonga le-Influencer Relationship Relationship (IRM), awuyi kuchonga kuphela bonke abachaphazeli abaphambili kwishishini lakho, kodwa ukwatyhile nendlela umntu ngamnye aluchaphazela ngayo uhambo lwabathengi ngokukodwa. UBrian Solis, Umhlalutyi weNqununu, iQela leAltimeter
Ukufumanisa ukuba ngubani ophembelela abathengi bakho kwinqanaba ngalinye lohambo lwabathengi kunokukunceda uchonge ngcono abona baphembeleli bahambelana kakhulu negama lakho. Ukongeza, inkqubo yeemephu zabathengi ityhila abachaphazeli abatsha abanefuthe kwizigqibo kumanqanaba abalulekileyo. Inkqubo yokwenza iimephu zabathengi iya kuthi inyanzele abathengisi ukuba baphinde bacinge ngemizamo yokuthengisa.
Ukwandiswa koHlahlo-lwabiwo mali lweMpembelelo kubonakalisa ukuPhathwa kweziCwangciso ngokubaluleka
Ukuqhubeka nokusondela kwintengiso yempembelelo njengesiqhelo kuya kubangela ukuba uphulukane nolawulo lwegama lakho kunye nokukwazi ukukhuphisana kwihlabathi apho kulawula khona abathengi. Lixesha lokuba ubeke phambili ubudlelwane obunempembelelo. Iinkokeli kufuneka zilungelelanise abachaphazeli ngobuchule kuyo yonke indawo yokuthintela abathengi kodwa, kufuneka batyale imali kwi Ulawulo loLwalamano iqonga lokubaleka ngokukuko kunye nokwenza ngcono ukubandakanyeka kwexesha elide.
Iipesenti ezingama-55 zomthengisi Uhlahlo-lwabiwo mali lwempembelelo kulindeleke ukuba lwande. Phakathi kohlahlo-lwabiwo mali lwabathengisi abasebenzisa itekhnoloji ukubetha Isicwangciso se-77% sokuchitha ngaphezulu. Ukujonga iitshathi ezingezantsi, kuyacaca ngokukhawuleza ukuba uninzi lohlahlo-lwabiwo mali lokuthengisa olunempembelelo luya kwanda kwiinyanga ezizayo.
Ukuba ukwishishini, ukwishishini lempembelelo. Utshintsho luhlala luqala kumgca omnye wohlahlo-lwabiwo mali ukuze ubenentshatsheli kumbutho ukuze sithi sizakuzama oku kwaye sibone ukuba kwenzeka ntoni. UFilipu Sheldrake, Ukulawula iqabane, amaQabane e-Euler
Ukuseta iSiseko seMpembelelo 2.0
Licala lakho. Njengomthengisi, uza kulukhawulezisa njani utshintsho lwedijithali? Ngokufunda ngakumbi malunga nendlela abathengi abazenza ngayo izigqibo kunye nezinto ezibachaphazelayo. Thatha ulwazi lwakho lwempembelelo 2.0 ngaphaya kwezi ziphumo zintathu ziphambili. Ukufumana amanyathelo alishumi anokuthabatheka kwaye uqalise ngokuseta isiseko seFuthe 2.0, khuphela Impembelelo ye-2.0: Ixesha elizayo lokuThengiswa kweMpembelelo. Funda ngakumbi ngohambo lweemephu, uguquko lwedijithali, kunye nefuthe namhlanje.
tags: iqela le-altimeterbrian solisuhambo lwabathengiImpembelelo 2Impembelelo 2.0Impembelelo ye-2.0: Ixesha elizayo lokuThengiswa kweMpembelelonefutheukuthengisa okunempembeleloabachaphazeli beenkquboUkulawulwa kobudlelwane obunempembeleloIRMUFilipu SheldrakeUmkhondo